Kpido: Spotify | Martech Zone
Transistor: Weghachite ma kesaa pọdkastị azụmahịa gị site na iji Platform Pọdkastị a
Otu n'ime ndị ahịa m arụlarị ọrụ dị egwu n'ịkwalite vidiyo na saịtị ha na site na YouTube. Site na ihe ịga nke ọma ahụ, ha na-achọ ime ogologo oge, ajụjụ ọnụ miri emi nke ndị ọbịa, ndị ahịa, na n'ime iji nyere aka kọwaa uru ngwaahịa ha. Podcasting bụ anụ ọhịa dị iche ma a bịa n'ịzụlite atụmatụ gị… na nnabata ya bụkwa ihe pụrụ iche. Ka m na-emepe atụmatụ ha, m na-enye nkọwapụta nke: Audio – mmepe
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị mepụta pọdkastị wee weta ndị ọbịa, ịmara otu ọ ga-esi sie ike. Ana m eji Zoom eme ihe ugbu a ebe ọ bụ na ha na-enye nhọrọ ọnụọgụ ọtụtụ mgbe m na-edekọ… na-ahụ na m nwere ike idezi usoro onye ọ bụla n'adabereghị. Ọ ka na-achọ ka m bubata egwu ọdịyo ma gwakọta ha n'ime Garageband, n'agbanyeghị. Taa, m na-agwa onye otu Paul Chaney ibe m okwu na ọ kesara m ngwaọrụ ọhụrụ.